La Xog weyn, iyo falanqaynta xogta guud ahaan, waxay qabtaan meel sii kordheysa oo muhiim ah oo ka mid ah xeeladaha ururo badan. Kormeerka waxqabadka, falanqaynta dabeecadda, daahfurka fursadaha suuqa cusub Codsiyada waa badan yihiin, waxayna xiiseeyaan qaybo kala duwan. Laga soo bilaabo ganacsiga e-commerce ilaa maaliyadda, oo ay ku jiraan gaadiidka iyo caafimaadka, shirkaduhu waxay u baahan yihiin xirfado lagu tababaray ururinta, kaydinta, laakiin sidoo kale habaynta iyo qaabaynta xogta.
MOOC-gan waxaa loogu talagalay qof kasta oo raba inuu ogaado aasaaska Sayniska Xogta, heerkuu doono ha noqdee. Ku salaysan helitaanka fikradaha iyada oo loo marayo muuqaallo, su'aalo iyo doodo, koorsooyinka iyo waxqabadyadu waxay bixiyaan hordhac caqabadaha xog ururinta, falanqaynta iyo maareynta.
Wax ka baro Sayniska Xogta iyo caqabadihiisa Diisambar 10, 2021Tranquillus
READ Shaqaynta taleefanka: shaqaaluhu ma ka faa'iideystaa foojarrada cuntada?
horeSaamaynta deegaanka ee tignoolajiyada dhijitaalka ah
socdaJimicsiga fekerka muhiimka ah: xogta beenta ah iyo sababaynta